Matongerwo eNyika, 01 Zvita 2019
Svondo 1 Zvita 2019
ZADHR Yokurudzira Mutungamiri weNyika Kupindira muGakava raVanachiremba
Sangano iri rinoti kana hurumende yakasagadzirisa gakava iri navanachiremba vari kuramwa mabasa ava, hupenyu hwevanhu vakawanda hucharamba huri munjodzi, vanhu vakwanda vachifa.
Kusashanda Zvakanaka kweZvipatara zveHurumende Kworemedza Zvipatara zveMamisheni
Chipatara cheKaranda chinonzi chakavakirwa kuti chibatsire vanhu vari pakati pezviuru zvisere nezviuru zvipfumbamwe zvevanhu vanogara munharaunda yedunhu reMt. Darwin pagore, asi iye zvino chinonzi chave kubatsira vanhu vanodarika makumi maviri ezviuru pagore.
Mbudzi 29, 2019
Magweta Anoratidzira Achinyunyuta neKwaanoti Kushungurudzwa neMapurisa
Magweta anodarika makumi matanhatu aratidzira kubva padare repamusoro reHigh Court kuenda kumahofisi egurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika VaKazembe Kazembe pamwe nekumuzinda wemapurisa uko kwaanosiya magwaro enyunyuto.
Zimbabwe Inobatana neUNICEF Mukucherechedza Zuva reKodzero dzeVana
Achitaura pamhemberero dzaitwa pamuzinda weparamende Madzivire, ati vechidiki vari kusiiwa nehurumende pamwe neparamende panoumbwa mitemo pamwe nepanotorwa matanho ane chekuita navo uye izvi hazvina kunaka.
Vanhu Vanoda Mapasipoti Vanotsikirirana paMahofisi aRegistrar-General kuChinhoyi
Amai Mliswa-Chikoka vaudza vatori venhau kuti huwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadandemutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya neMuvhuro.
Mbudzi 28, 2019
Nhumwa yeUnited Nations Yoyambira Kuti Zimbabwe Inogona Kuita Hondo Zvinhu Zvikasagadziriswa
Nhumwa yeUnited Nations Muzvare Hilal Elver avo vange vachishanya muZimbabwe vari kuyambira kuti munyika munogona kuita kusagadzikana nenyaya yenzara.
Zanu-PF Yokanganisazve Makomiti eParamende Anotungamirwa neMDC Kuita Basa
Nhengo dzedare reZanu PF nhasi dzavhiringa musangano wekomiti yeparamende inoona nezvekuburitswa kwemashoko dzichiti MDC inofanira kutanga yacherechedza mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa
Kukakavadzana kweZanu PF neMDC Kwokanganisa Mabasa eParamende
Kubva pakaziviswa zvakabuda musarudzo dzegore rapera, izvo zvairatidza kuti mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, bato rinopikisa reMDC rakatora danho rekuramba kuvacherechedza semutungamiri wenyika, richiti VaMnangagwa vakakundwa naVaChamisa.
VaMasiiwa Voumba Homwe yeKubatsira Vanachiremba Vari Kuramwa Mabasa
Shoroma uye vari muridzi wekambani yenharembozha yeEconet Wireless VaStrive Masiiwa nemudzimai wavo Amai Tsitsi Masiiwa vati vaumba homwe yemari inosvika mamiriyoni zana yemadhora emuZimbabwe kubatsira vanachiremba vari kuramwa mabasa.